कोरोना संक्रमणको दर झन बढेको बढ्यै -कोरोना संक्रमणको दर झन बढेको बढ्यै -
कोरोना संक्रमणको दर झन बढेको बढ्यै
३१ भाद्र २०७७, बुधबार ०७:२७ मा प्रकाशित
काठमाडाैं। नेपालमा थप १ हजार ४५९ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिएको छ ।
देशका विभिन्न प्रयोगशालामा १० हजार ३७५ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा थप १ हजार ४५९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
सोमवार १ हजार १७० जनामा कोरोना पुष्टि भएकोमा मंगलवार यो संख्या ह्वात्तै बढेको हो ।
हालसम्म कूल संक्रमितको संख्या ५६ हजार ७८८ र सक्रिय संक्रमितको संख्या १५ हजार ७७९ रहेको छ । प्रवक्ता डा. गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप १ हजार ६२ जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएको जानकारी दिए । यससहित नेपालमा डिस्चार्ज हुनेको कूल संख्या ४० हजार ६३८ पुगेको छ ।
देशभरका क्वारेन्टीनमा ६ हजार ८९२ जना रहेको जानकारी दिँदै होम आइसोलेसनमा ७ हजार ६४० जना रहेका बताए । त्यसैगरी संस्थागत आइसोलेसनमा ८ हजार १३९ जना रहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप ६७६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । उपत्यकामा यो संख्या सोमवार ५१२ थियो । मंगलबार काठमाडौंमा ५५५, भक्तपुरमा ८६ र ललितपुरमा ३५ जनामा संक्रमण देखिएको हो । यससँगै उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या १२ हजार ९२४ पुगेको छ ।
काठमाडौंमा १० हजार ५८३, ललितपुरमा १ हजार २२६ र भक्तपुरमा १ हजार ११५ संक्रमित पुगेका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणले थप ११ को मृत्यु भएको छ । तीमध्ये ४ महिला र ७ पुरुष छन् । यससहित नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३७१ पुगेको छ ।
नेपालमा आईसीयूमा उपचार गराउने कोरोना संक्रमितको संख्या २०२ छ । मन्त्रालयका अनुसार २८ जना भेन्टिलेटरमा र १७४ जना संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत छन् ।
आईसीयूमा रहेका संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १२३ जना आईसीयूमा र २५ जनाले भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन् । प्रदेश–५ मा २२ जना आईसीयू र १ जना भेन्टिलेटरमा, प्रदेश–१ मा ५ जना आईसीयू र १ जना भेन्टिलेटरमा, सुदूरपश्चिममा १ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । प्रदेश–२ मा ९, गण्डकी प्रदेशमा ६ र कर्णाली प्रदेशमा ९ जना आईसीयूमा उपचाररत छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।पत्रपत्रीकाबाट